Takela-bato misy hena vita an-trano (karazana Avecrem®) - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Takela-bato misy hena vita an-trano (karazana Avecrem®)
Androany aho te-hanolotra ny zavatra hitako farany tsara: ny takelaka bouillon namboarina (karazana Avecrem®).
Imbetsaka izahay no mampiasa takelaka fitehirizana hena manatsara ny tsiro ny sakafonay, ny saosy, ny saosy ... fa marina fa tsy fantatsika tsara hoe inona izy ireo ary ahoana ny fomba nanaovana azy. Ankehitriny isika dia afaka manao azy ireo, ka manana ron-kena mahasalama sy mora vidy kokoa.
Rehefa manao izany ianao dia ho hitanao fa ny mihasimba Tsy ho toy ny pilina novidintsika fa hitovy amin'ny puree (na dia miankina amin'ny rano amin'ny legioma sy sira ampiasaintsika aza izany. Ka ny eran'ny sotrokely iray amin'ny volonay dia hitovy, mihoatra ny latsaka, amin'ny pilina voavidy (mety ho 1 sotrokely ho an'ny ranoka 500 g). Ankoatr'izay, noho io firafitra io, dia levona haingana ao anaty rano mafana izy io.
Tiako ity fomba fahandro ity satria afaka manao be dia be isika ary tazomy ao anaty siny mihidy tsara ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 1 taona noho ny habetsahan'ny sira ao anatiny.
Ankoatra izany dia misy ihany koa ny kinova vegetarian, feno legioma ary tsy misy hena.
Koa mamporisika anao izahay hanomana azy satria rehefa manandrana azy ianao dia ho tianao ny manomana ny pilina an-tranonao manokana.
1 Takela-bato misy hena vita an-trano (karazana Avecrem®)
Fomba fahandro fototra sy tena ilaina ao an-dakozianay.
Fotoana hiketrehana: 33M
Fotoana manontolo: 33M
300 g hena mahia (mety ho akoho, hen'omby, henan-kisoa ...) tsy misy hozatra na taolana
Legioma 300g (karaoty, seleria, tongolo, tongolo, voatabia...)
300 gr ny sira madity
Divay mena 30 g
Ravina bay 1
Apetrakay ao anaty vera ny hena dia tapatapantsika 10 segondra, hafainganam-pandeha 7. Niala izahay ary nitahiry.
Napetrakay daholo ny legioma ary notetehinay 10 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Ampiarahinay ny sira, ny hena izay efa notehirizinay, ny divay, ny ravina bay ary ny fandaharanay 30 minitra, varoma, hafainganana 2.
Amin'ity dingana ity, raha tokony hapetraka ny beaker, dia hametraka ny harona isika mba hamela ny rano hihena ary hahatonga azy ho matevina araka izay azo atao.
Rehefa tapitra ny fotoana dia avelantsika hidina kely ny mari-pana (hatramin'ny 80º eo ho eo), manova ny harona ho an'ny goblet sy manorotoro isika 1 minitra, hafainganam-pandeha 10.
Avelantsika hangatsiaka izy ary hitahiry azy amin'ny siny ao anaty vata fampangatsiahana.
Azo tehirizina ao anaty siny ao anaty vata fampangatsiahana koa izy io. Tsy mivaingana ny paty ary mora ampiasaina.
Fanazavana fanampiny - Fomba fahandro fototra: takelaka vita amin'ny legioma mifantoka
Loharano - Boky Tena ilaina
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Carnes, Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Lasopy sy menaka » Takela-bato misy hena vita an-trano (karazana Avecrem®)
mahandro dia hoy izy:
Miarahaba anao aho noho ity fomba fahandro voalohany ity. Sambany aho nahita ny fomba fahandro momba an'io karazana io. Ny zavatra ananako fisalasalana dia ny hoe mety haharitra tokoa ve izany ao anaty vata fampangatsiahana nefa tsy marary.
Mamaly an'i Cook
Faly be aho fa tianao izany. Ireo izay namorona ny fomba fahandro dia nilaza fa noho ny habetsaky ny sira marobe ao anatiny dia mitazona azy tsara hatramin'ny 1 taona izy io. Saingy, raha ny amiko, rehefa mampiasa azy io betsaka aho dia tsy maharitra herintaona. Na izany na tsy izany, azonao atao foana ny mahazo ny antsasaky ny vola ary handany azy io mialoha.
Eny mitazona izany fotoana rehetra izany, manamafy aho. Ity recipe ity dia ao amin'ny boky "Essential" miaraka amin'ny Thermomix, ary efa nataoko hatrany am-piandohana ny recipe, mahafinaritra. Asiako jirofo ihany koa, ary ny ataoko foana amin'ny anana dia ny tongolo gasy, satria manome tsirony be.
Ny hevitra dia ny mametraka lanja mitovy amin'ny hena, legioma ary sira maratra ihany. Izany hoe, raha tsy manana hena 140 grama fotsiny ianao dia asio legioma 140 grama sy sira marihitra 140 grama. Tena tsara !!!
Misaotra ny hevitrao, tsara foana ny mahafantatra fa mihinana tsara ny fomba fahandro iray. Mila manandrana manao azy ireo amin'ny trondro sy legioma aho. Hiezaka ny jirofo aho amin'ny manaraka, azo antoka fa manohina izany.
Eny, tsy maintsy manandrana isika! Matetika aho tsy mampiasa pilina avecrem matetika, fa ohatra ny manao vary kiobanina, na vichyssoise ataoko. Ary tsy azo hafangaro izany?
Amin'ity fomba fahandro ity dia azonao ampiasaina amin'ny zavatra hafa maro, soloina sira. Io, ankoatry ny sira, dia hanatsara ny tsiron'ny loviao. Tsy afaka mivaingana izy io noho ny habetsaky ny sira ao anatiny, tsy ho lasa mangatsiaka mihitsy izy io. Hilaza aminay ianao raha tianao ity famoronana vaovao ity.
Tena tiako ny bilaoginao, mahafinaritra ireo resipeo, saingy tiako ny hanomezanao fomba fahandro ho an'ny diabeta, saingy miaraka amin'ny habetsaky ny zava-mamy mba ho azo atao indrindra amin'ny resaka confectionery… .misaotra
Paula www.mixthermorecetas.com dia hoy izy:
Mampiasa azy ireo aho ary koa manjono 😀, fomba tsara hanatsarana ny loviao izany; ary amin'ny fomba voajanahary. Ankehitriny dia tsy maniry afa-tsy legioma vitsivitsy aho. Mazava ho azy, tazomiko ao anaty vata fampangatsiahana izy ireo; ary na dia tsy mangatsiaka tanteraka aza izy ireo dia mijanona ho henjana ihany.
Valio amin'i Paula www.mixthermorecetas.com
Mazava ho azy, noho ny sira dia tsy mihamangatsiaka izy ireo, fa raha tsara ny volony dia mahaliana ihany koa ny fahalalana. Misaotra tamin'ny hevitrao!
mari carmen5 dia hoy izy:
Fenomenal !! Tiako be izany, heveriko fa safidy tsara sy mahasalama kokoa amin'ny takelaka misy ron-kena vita amin'ny hena ara-barotra ity. fiarahabana
Valio i mari carmen5
andramo izy ireo, azo antoka fa ho tianao izy ireo. Amin'izany no hialantsika amin'ny fihinanana ireo indostrialy… tsy tena fantatsika izay tena entin'izy ireo. Hilaza aminay ianao raha tianao izany!
Yaya dia hoy izy:
Mahaliana tokoa, ny marina dia tsy mampiasa thermomix betsaka araka ny tokony ho izy aho. Manana fanontaniana aho ... Ahoana ny fampiasana azy? Atsofohy anaty siny ary ampiasao amin'ny sotro?
Mamelà ny tsy fahalalako, misaotra, arahaba
Mamaly an'i Yaya
Salama Yaya, izany tokoa no fampiasako azy, sotro kely iray dia mitovy amin'ny pilina. Azonao atao ihany koa ny mametraka azy ao anaty siny gilasy ary manala azy ary amin'izany dia mety hanana endrika takelaka tsirairay ianao. Ho hitanao fa mahasoa azy ireo 🙂 Ary tsy misy dikany ny tsy fahalalana, ahoana araka ny eritreritrao no nanombohan'ireo sisa tavela taminay? Oroka sy fisaorana nanoratra anay, eto izahay noho izay ilainao.
Natalia | ditin-kazo manitra dia hoy izy:
Misaotra an'ity resipeo tsotra ity, ny tena marina dia mampiasa pilina hena ara-barotra kely fotsiny aho noho ny olana amin'ny sira, mieritreritra aho fa tsy maintsy mamerina ny sakafo voajanahary isika rehetra mba ho salama kokoa.
Mamaly an'i Natalia | ditin-kazo manitra
Azonao atao ny mampiasa an'ireny pilina homemade ireny bebe kokoa, satria salama kokoa izy ireo. Mazava ho azy, azonao atao ny manampy pilina kely amin'ny loviao ary mifehy bebe kokoa ny haben'ny sira. Marina fa tsy maintsy mamerina ny nahandro voajanahary isika ... indraindray noho ny karazam-piainana entintsika mankany amin'ny mora, ary matetika tsy maharitra ela ny fanaovana zavatra any an-trano. Misaotra tamin'ny hevitrao!
Peppa dia hoy izy:
Misy mahalala ny fomba fanaovana ilay recette trondro ve? Raha samy manana ny fangaro azy ireo ny iray.
Valiny tamin'i Pepa
Salama Pepa, ny trondro dia namboarina nitovy tanteraka tamin'ny hena, fa soloina trondro ny grama hena (trondro, hake, ranomasina, ranomasina, monkfish ...). Ny sisa amin'ny fangaro dia hitovy.
Mandria, manentana ahy hanao ity fomba fahandro ity, nasiako eran-sotro ny lasopy ary ny marina dia manome tsiro be dia be toy ny 10 hafa hatrany ho an'ny resipeo. Misaotra betsaka
Amporisihina ihany aho amin'ny farany hanao an'ity fomba fahandro ity, nasiako eran'ny sotrokely ao anaty lasopy ary manome azy tsiro lehibe. Toy ny mahazatra, 10 hafa ho an'ny resipeonao
Salama M Jose, fifaliana toy inona moa no nataonao tamin'izy ireo ary tsara be ry zareo! Faly aho. Misaotra tamin'ny hevitrao!
Juan José dia hoy izy:
Salama. Misaotra tamin'ny fandraisanao anjara.
Misy mahay manao pilina ron-kena na legioma ve?
Valiny tamin'i Juan José
Salama Juanjo, mbola tsy nanao ny takelaka bouillon aho, fa ny fomba fahandro azoko dia ny mametraka legioma 800-900 grama sy sira 300 grama, saingy tsy afaka manome toky anao aho… Miala tsiny. Raha manao izany ianao, dia tsara raha azonao lazaina aminay ny momba azy, okay? Misaotra !!
SAMOELA dia hoy izy:
Matetika aho tsy mba manome hevitra ao amin'ny Blogs fa ny pejinao no nanery ahy hanao asa miavaka.
Mamaly an'i Samuela
ladybug dia hoy izy:
Andao hojerentsika fa hitako, mba hahafahanao manokatra sy manidy ny vilany isaky ny hitanao ary tsy ho ratsy?
Mamaly an'i marikilla
Marikilla, mazava ho azy, izany no momba azy. Manokatra ny tavoahangy ianao ary manampy ny vola ilainao (amin'ny ankapobeny dia ho iray na roa sotro fihinanana ny ankamaroany), dia apetaho tsara mba hanaronana ny banga navelan'ny sotro na sotro fihinana azonao, akatona ny tavoahangy ary miverena mankany amin'ny vata fampangatsiahana indray . Haharitra anao farafahakeliny 6 volana, preservatiora lehibe ny sira.
Salama, raha manana fatin'akoho aho dia afaka mampiasa azy? Azoko an-tsaina fa tsy maintsy apetraka ao anaty harona aho, saingy satria tsy misy rano ny fomba fahandro, dia tsy haiko raha ilaina be izany. Ary raha azo ampiasaina, avelako ve ny habetsaky ny zavatra hafa sa manala hena aho?
tsia, TSY afaka mampiasa ny fatin'akoho ianao, azafady! Tehirizo tsara kokoa ny fananganana tahiry matsiro na ron-kena (avelako ho anao ny rohy mankany amin'ny ron-kena: http://www.thermorecetas.com/2011/02/19/receta-thermomix-caldo-de-puchero-con-gallina/). Ao amin'ny takelaka dia mila manorotoro ny zava-drehetra isika ... noho izany dia tsy misy ilana azy ny faty eto. Misaotra anao nanaraka anay!
LOUISE dia hoy izy:
Salama Irene, misaotra tamin'ny fanomezana nataonao tamin'ny endrika broth concentré !!
Araka ny efa nolazaiko teo amin'ny fanehoan-kevitra teo aloha, ny tahiry indostrialy REHETRA (afa-tsy ireo amidy amin'ny herbalists) dia misy MONOSODIUM GLUTAMATE, izay antsoina matetika hoe "fanatsarana tsiro" ary alainy ankoatra ny Avecrem, ovy miaraka amin'ny hanitra, fromazy, hookahs, doritos ... Ary vokatra maro hohanin'ny ankizy.
Tena poizina izy io, ary izany no antony tiako hametrahana rohy, ka amin'ny alàlan'ity pejy ity miaraka amin'ny fomba fahandro mahafinaritra, dia azon'izay liana amin'ny olana ara-pahasalamana sy ny sakafo mahasalama sy voalanjalanja.
Manantena aho fa manampy anao io !!!
Etsy an-danin'izany, mba hanamboarana ny ron-kena feno legioma dia azonao esorina ny 300gr. hena ho an'ny legioma 300 hafa ??
Raha atotaly 600 gr. ny legioma sy 300gr. ny sira?
Valiny amin'i LUISA
Salama Luisa, misaotra betsaka tamin'ny fanehoan-kevitrao, manome vaovao be izy io. Ho an'ny ron-kena, legioma 700-800 eo ho eo no asiko isaky ny sira maratra 300 grama, mba tsy masira be loatra. Hiteny ahy ianao!
Gonzalo Mateos Becerro dia hoy izy:
Ny firafitry ny pilina indostrialy dia mistery mitovy amin'ny endrika Coca-Cola.
Valiny tamin'i Gonzalo Mateos Becerro
Ny fanontaniako dia momba ny divay. Nampiasaiko izy io mba hanaovana sakafo ho an'ny zazavavy ary tsy haiko raha mety ho raisin'izy ireo izany, na dia toa tsy dia kely aza izany ... Fantatrao ve raha mety hanimba ny fomba fahandro ho an'ny ankizy raha manana divay izy ireo? Azo atao ve raha tsy misy divay ary hitovy ve?
Misaotra sy miarahaba ny bilaoginao. Tiako!
Salama Maria, azonao ampiasaina amin'ny fiadanan-tsaina tanteraka izany satria ny divay, rehefa mahandro, dia manaloka ny alikaola rehetra. Na izany na tsy izany, firy taona ny zazavavinao? Angamba, raha tena kely izy ireo, dia tsy mora ny mampiasa takelaka bouillon noho ny habetsaky ny sira ao anatiny. Misaotra nanoratra taminay! Famihinana lehibe avy any an-dakozian'ny Thermorecetas 😉
Lola dia hoy izy:
Ary tsy azo atao ve ny mampihena ny habetsaky ny sira ary mihamangatsiaka ao anaty cubes?
Valiny tamin'i Lola
Salama Lola, tsy misy olana, mety pilina pilina ambany ianao ary, noho izany, mila mampiasa bebe kokoa ianao rehefa mampiasa azy ireo 🙂
beatrice dia hoy izy:
Salama, ao amin'ilay boky miaraka amin'ny thermomix ny antsasaky ny sira dia 150grs.
Inona ny marina teceta?
Mamaly an'i Beatríz
Ely dia hoy izy:
Vao nanao an'io aho dia adinoko ny nametraka lapa. Efa lany io, azafady azafady manamboatra azy io
Mamaly an'i Ely
Amin'ity fomba fahandro ity dia hadinoko ny nametraka harona
Ary nandany ahy izany
Azoko atao ny manamboatra azy ???? Maika
Salama e! Misaotra! Vaovao aho ary manana tm21 ... azoko tsara fa ny torolàlana omenao dia avy amin'ny tm31 ary tsy maintsy hanao ny fiovam-po aho, sa tsy izany?
Miala tsiny raha miharihary ny fanontaniana ... ka amin'ny ankapobeny dia hazavaina amin'ny bilaoginao ny momba ny tm31?
Salama Lore, anontanio izay ilainao fa vao vao teraka isika rehetra ary nianatra tamin'ny fangatahana izahay !! Ka aza manana olana amin'ny fangatahana na amin'inona na amin'inona. Eny eny, ity bilaogy ity dia miompana amin'ny TM31, ka avelako eto aminao ity lahatsoratra ity izay hanazavantsika ny maha samy hafa ny maodely rehetra sy ny toerana hahitanao latabatra misy fitoviana hahafahanao mampifanaraka izay fomba fahandro amin'ny maodelin'ny thermomix anao. Manantena aho fa afaka manampy anao ity !! Raha manana fanontaniana hafa ianao, soraty izahay! Misaotra anao nanaraka anay 🙂
Maria Dolores dia hoy izy:
Omaly aho no nanao an'ity recette ity ary tena masira be 😭
Salama MªDolores, azonao atao ny manitsy kely ny sira araka izay tianao, fa tadidio fa ny sira be loatra no mahatonga azy io ho fitehirizana ao amin'ity recipe ity. Azonao atao ny mampihena ny habetsaky ny sira ao amin'ny recipe na mampiasa sira kely kokoa amin'ny sakafo. Misaotra anao tamin'ny hafatrao!
Croquette Brie sy Hama